Soomaalida Malmö oo shinni dhaqata halkii geela - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soomaalida Malmö oo shinni dhaqata halkii geela
La daabacay onsdag 15 mars kl 17.32
Mustafe Axmed oo loo doortay agaasime guud
Mustafe Axmed Jaamac, agaasima is-kaashatada Urbi. sawir: Sawirle: Kenadid Mohamed/SR
Xubno ka tir-san ururka Hidde iyo Dhaqan oo ka dhisan magaalada Malmö.
Xubno ka tir-san ururka Hidde iyo Dhaqan oo ka dhisan magaalada Malmö. sawir: Sawirle: Kenadid Mohamed/SR
Hayadda Arvsfonden ayaa kulan ay soo abaabushay oo ka dhacay magaalada Stockholm gabagabadii toddobaadkii ina dhaafay ay ku casuntay howl-wadeenno ka socda hayadaha kala duwan ee waddanka, ururrada dadyoowga aaney awooddoodu dhammeeyn iyo sidoo kale ururrada bulshada.
Kulankaasi oo looga arrinsanayey sidii dadyoowga iimaha leh loogu sahli lahaa nidaamka tacliinta, shaqada iyo is-dhex-galka bulshada uu goob joog ka ahaa xubno ka tir-san urur lagu magacaabo Hidden iyo Dhaqan ee ka aloo-san magaalada Malmö. Ururkaasina oo ku howlan mashruuc loogu magac-darey Bisam iyo shirkadda iskaashatada Urbi oo ey ka howl-galaan qaar ka mid ah curyaamiinta iyo dadyoowga aaney xubnahoodu dhammeyn:
Mashruuc ku kacay miisaaniyad kor u gaareeysa 60 malyan oo koronka iswiidhishka oo socday muddo laba sannadood ah oo ey ka qayb galeen ururro laba boqol tiradoodu gaareeyso ayuu ka mid ahaa ururkani afar lagu casumay gabagabadii qiimeeynta mashruuca ”Egen Kraft! – Xooggaaga”.
Wiilo Ibraahim oo ka howl-gasha mashruuc lagu magacaabo Bisam iyo shirkad iskaashato ee loogu magac-darey Urbi ayaa goob-joog ka ahayd kulankaas:
Ishaakashatada Urbi oo lagu talo jiro in howsheeda la ballaariyo ayna noqoto mid isku filan ayaa dhowaantan loo magacaabay inuu agaasime guud ka noqdo Mustafe Axmed Axmed Jaamac, oo isaguna goob joog ka ahaa kulankaasi. Mustae Axmed oo ey la socdeen laba kalkaaliye oo ka caawinayey sidii aannu isku fahmi laheyn maadaama uu isticmaalayay luuqadda Please oo aannan anigu garanayn.
Wareeysigii Mustafe oo dhameeys-tiran waxaad ka daalacan kartaan bogga idaacadda ee www.sr.se/somaliska.
Wareeysigii Mustafe Axmed Jaamac oo dhameeys-tiran